Wizz Air dia manambara toby vaovao ao Larnaca
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Wizz Air dia manambara toby vaovao ao Larnaca
Wizz Air nanambara androany 28th monina ao Larnaca. Hiorina amin'ny fiaramanidina Airbus A2 320 ny seranam-piaramanidina ao amin'ny seranam-piaramanidina Larnaca amin'ny Jolay 2020. Miaraka amin'ny fananganana ny toby vaovao, dia nanambara serivisy vaovao iraika ambin'ny folo ho an'ny firenena fito avy any Larnaca ny Wizz Air manomboka amin'ny Jolay 2020.
Ny tantaran'i Wizz Air tany Chypre dia niverina tamin'ny folo taona lasa rehefa tonga ny sidina voalohany tamin'ny Desambra 2010. 800 tapitrisa ny mpandeha nitondra kaody avy any Sipra tamin'ny taona 2019. Ho lasa 28 an'i Wizz Air i Larnacath base. Ao anatin'ny fanitarana ny WIZZ dia manohy mampitombo ny asany any Sipra 60% ny kaompaniam-pitaterana ary lasa mpitarika tsena.
Ny fananganana fototra any Larnaca dia hamorona asa mivantana vaovao miisa 100 miaraka amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka ary asa bebe kokoa aza amin'ny indostria mifandraika amin'izany. Ny fiaramanidina 2 Airbus A320 dia hanohana ny asan'ny zotra vaovao iraika ambin'ny folo mankany Athens, Tesalonika, Billund, Copenhagen, Dortmund, Memmingen, Karlsruhe / Baden Baden, Salzburg, Suceava, Turku, Wroclaw izay amina seza iray tapitrisa amidy avy any Larnaca amin'ny 2020. Ny tambajotra goavambe Wizz Air dia hanohana ny toekarenan'i Sipra ary hampifandray ny nosy amin'ny toerana vaovao sy mahaliana.
Wizz Air dia seranam-piaramanidina manana laharam-bola naoty misy famatsiam-bola, miaraka amina andian-taona antonony 5.4 taona, misy ny fiaramanidina Airbus A320 mahomby sy maharitra indrindra misy Airbus A320neo fianakaviana tokana. Ny fandefasan-karbaona dioksidan'ny Wizz Air no ambany indrindra amin'ireo kaompania eropeana tao amin'ny FY2019 (57.2 gr / km / mpandeha). Wizz Air dia manana boky misy baiko lehibe indrindra misy fiaramanidina 268 an'ny fianakaviana Airbus A320neo manara-penitra izay ahafahan'ny zotram-piaramanidina hampihena bebe kokoa ny dian-tongotr'izy ireo hatramin'ny 30% isaky ny mpandeha hatramin'ny 2030.
Tonga ny fanambarana androany satria manomboka amin'ny Wizz Air ny vanim-potoana vaovaon'ny dia madio. Ny zotram-pitaterana an'habakabaka dia nanambara ny fepetra fanatsarana ny fahadiovana, hiantohana ny fahasalaman'ny mpanjifany sy ny ekipany. Ao anatin'nireo protokolola vaovao ireo, mandritra ny sidina dia samy mila misaron-tava ny mpiasa an-trano sy ny mpandeha ary ny ekipazy koa mila manao fonon-tànana. Ny fiaramanidin'i Wizz Air dia apetraka tsy tapaka amin'ny alàlan'ny fizotran'ny fogging ataon'ny indostria miaraka amin'ny vahaolana antivirus ary, taorian'ny fandaharam-potoanan'ny fanadiovana isan'andro nataon'i WIZZ, ny fiaramanidin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka dia mbola voajanahary indray miaraka amin'ny vahaolana antivirus iray ihany. Ny tasy fanadiovana dia atolotra ny mpandeha tsirairay rehefa miditra amin'ny fiaramanidina, nesorina tamin'ny fiaramanidina ireo magazina, ary ny fividianana an-tsambo dia entanina amin'ny alàlan'ny fandoavana tsy misy ifandraisana. Ny mpandeha dia angatahina hanaraka ny fepetra lavitra hatrehin'ireo manampahefana misahana ny fahasalamana eo an-toerana ary entanina izy ireo mba hanao ny fividianana rehetra alohan'ny sidina an-tserasera (oh: voamarina anaty valizy, Laharam-pahamehana WIZZ, làlam-piarovan-tena haingana), mba hampihena ny fifandraisana ara-batana rehetra azo atao ao amin'ny seranam-piaramanidina.
Hanomboka hanangona mpirotsaka hofidina tanora sy be zotom-po i Wizz Air ho an'ny fototra vaovao.
Niresaka tamin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety tao Larnaca androany i József Váradi, tale jeneralin'ny Wizz Air Group: "Taorian'ny folo taona nahombiazan'ny asa nahomby tany amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Larnaca, faly aho nanambara ny toby vaovaonay vaovao eto, satria hitantsika ny mety sy ny fangatahana dia lavitra amin'ny dia any Sipra izay iray amin'ny toerana malaza indrindra mpizahatany ary mivoatra haingana. Izahay dia manolo-tena hampivelatra ny fisianay any Chypre, ary manolotra fahafaha-mandeha mora vidy kokoa mankany sy avy any Larnaca, ary mitazona hatrany ny fenitra avo lenta amin'ny kaonti-tsika fanadiovana. Ny fiaramanidina Airbus A320 sy A321 neo manara-penitra ary koa ny fepetra arovan'ny fiarovana anay dia hiantoka ny fahadiovana tsara indrindra ho an'ny mpandeha. Wizz Air no mpamokatra vidiny ambany indrindra ary manana toerana matanjaka indrindra eto Eropa izay miasa ny fiaramanidina tanora indrindra sy mahomby indrindra amin'ny sidina ara-tontolo iainana ambany indrindra. Miaraka amin'izany dia matoky aho fa ny Wizz Air dia hisy fiatraikany lehibe amin'ny fampandrosoana ara-toekarenan'i Sipra sy ny fisondrotan'ny indostrian'ny fizahantany. ”
Andriamatoa Yiannis Karousos, minisitry ny fitaterana, ny fifandraisana ary ny asa-tanana dia naneho hevitra hoe: “Nandritra izany fotoana rehetra izany, ny paikadinay dia nifantoka ihany koa tamin'ny fampandrosoana ny firenena sy ny ampitso. Faly izahay noho izany manambara fa ny famerenana amin'ny laoniny ny fifandraisan'i Sipra dia natomboka tamin'ny fomba tsara indrindra, satria ampiarahina amin'ny fananganana tohodrano ny seranam-piaramanidina manan-danja, Wizz Air, miaraka amin'ny sidina mankamin'ny toerana izay tsy ananantsika. ny fifandraisana hatramin'ny anio, miaraka amin'ny tombony miavaka amin'ny toekarem-pirenentsika ”.
Nampiany Andriamatoa Eleni Kaloyirou, CEO an'ny Hermesports, hoe: “Faly izahay manambara anio ny fananganana ny toby vaovao Wizz Air ao amin'ny seranam-piaramanidina Larnaca. Ny safidin'i Sipra ho fototra faha-28 an'ny Wizz Air amin'ny fotoan-tsarotra toy izany ho an'ny indostrian'ny seranam-piaramanidina dia ny fahatokisan-tena lehibe ho anay ary manasongadina ny vinavinan'i Sipra tonga lafatra. Matoky izahay fa amin'ny alàlan'ny fanitarana ny fiaraha-miasa misy vokany dia hampitombo ny fifandraisan'i Sipra amin'ireo toerana kendrena stratejika hahazoana fidirana tsara kokoa, miaraka amin'ny tombony lehibe ho an'ny indostrian'ny fizahantany sy ny harinkarenan'ny Siprosy amin'ny ankapobeny ”.
Ny fahatongavan'ireo mpitsidika ny Nosy Hawaii dia nihena 99.5 isan-jato tamin'ny volana aprily